Faritra Sofia: tsy ampy tosika ireo mpamboly lojy | NewsMada
Faritra Sofia: tsy ampy tosika ireo mpamboly lojy
Par Taratra sur 20/08/2018
Faritra iray anisan’ny mpamokatra lojy (black eyes) be indrindra eto amin’ny Nosy ny any Sofia, ao amin’ny distrikan’i Port-Bergé sy i Mampikony. Manana velaran-tany baiboho ahazoana mamokatra tsara izany ny any an-toerana, saingy mbola tsy ampy tosika eo amin’ny lafiny teknika, mpamboly madinika rahateo ny maro anisa.
Na izany aza, betsaka amin’ny vokatra lojy aondrana any ivelany ny avy amin’ireo mpamboly madinika ireo, mahavokatra 1,5 t na 2 t/ ha. Ireo mpamboly ireo anefa, noho izay tsy fahampian-tosika izay, 3 ha raha be indrindra ny baiboho voavolin’izy ireo. Mahavita hatrany amin’ny 50 ha ireo mpamboly lehibe.
Tsy eo amin’ny lafiny fambolena ihany ny ahitana olana fa eo indrindra koa ny lafiny varotra. Tsy vitsy amin’ireo mpanangom-bokatra tonga any an-toerana ny mividy any amin’ireo olona tsy mandoa haba ; manao izay hialana amin’ny tsy fandoavana tamberim-bidy any amin’ny kaominina koa ireo mpanangom-bokatra ireo, noho ny kolikoly isan-karazany hatrany amin’ny lalam-pirenena hamoahana ny vokatra, raha ny fitarainan’ireo mpamboly manara-dalàna.
Amin’ny ankapobeny, saika ireo tantsaha mpamboly madinika hatrany no matiantoka, hararaotin’ireo mpanangom-bokatra. Taloha ny maro tamin’izy ireo, namboly hasy na paraky, ary izao mitodika amin’ny fambolena lojy izao. Eo amin’ny 1 200 Ar izao ny kilaon’ny lojy, miankina amin’ny kalitaony.